Apple Arcade: vidiny, fanombohana ary fisongadina ofisialy | Vaovao momba ny gadget
Ny Apple keynote dia efa natomboka, hetsika iray izay hametrahan'ny orinasa Cupertino antsika vaovao isan-karazany. Anisan'izany, izay nanombohany ny hetsika, dia vaovao momba ny Apple Arcade. Tamin'ny volana martsa lasa teo izy ireo no nanambara voalohany an'ity sehatra ity, izay nanambaran'izy ireo ihany ny pitsopitsony rehetra, toy ny daty fandefasana azy, iray amin'ireo zavatra tsy fantatra hatreto.
Ny marina dia izay tsy mila miandry ela loatra isika vao hanomboka ny Apple Arcade mankany an-tsena. Satria amin'ity volana ity izany rehefa tonga any Espana ny lalao filalaovan'ilay goavambe amerikana. Ho fanampin'izay, ny zava-drehetra momba ny asany sy ny vidiny dia efa naseho.
Ny iray amin'ireo fisalasalana dia ny fotoana hanombohana ofisialy ity serivisy an'ny orinasa ity. Nahazo valiny momba izany izahay, satria Apple Arcade dia hanomboka amin'ny 19 septambra any Espana Ary amin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Ity daty ity dia tsy voafidy ho azy, satria io no daty nanombohan'ny orinasa iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 ary macOS Catalina manerantany.
1 Ahoana ny fomba fiasan'ny Apple Arcade
2 Lalao, fampidinana ary sehatra
3 Lalao Catalog
Ahoana ny fomba fiasan'ny Apple Arcade
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe dia ny fomba fiasan'ity serivisy orinasa ity. Apple Arcade dia tsy zavatra hampidinintsika, tafiditra ao amin'ny App Store izy io. Izy io dia ho takelaka manokana ao aminy, izay ahafahantsika miditra amin'ity serivisy amerikanina ity. Amin'ity serivisy ity dia hanana fidirana maimaim-poana sy fisintomana ireo lalao ao aminy izahay. Lalao karama izy ireo, saingy amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana dia miditra amin'izy ireo izahay, toy ny hoe nividy azy ireo isika.
Ho fanampin'izany, omena ny fidirana amin'ny kaontin'ny fianakaviana, ka olona hatramin'ny enina no afaka miditra amin'ity serivisy ity ary misintona ireo lalao ireo. Nanamafy izany i Apple ny katalaogy am-boalohany lalao dia ho anaram-boninahitra mihoatra ny 100 mitovy. Na dia hitarina mandritra ny volana maro aza, miaraka amin'ny fahatongavan'ireo titre vaovao. Impiry ny lalao vaovao havoaka dia mbola tsy voamarina.
Hiova ny katalaogin'i Apple Arcade. Midika izany fa ny lalao izay misy eo am-piandohana dia afaka mamela ny lasa taloha ihany mandritra ny fotoana fohy. Toa misy antoka fa hisy lalao iray farafahakeliny herintaona eo amin'ny sehatra misy alohan'ny hamoahana azy. Raha te-hanohy hilalao azy io isika rehefa mivoaka, dia tsy maintsy mandoa vola isika raha mampidina azy amin'ny fitaovana. Amin'ity fomba ity ny hevitra hitazonana ny safidinay ankehitriny izay manitsy ny tsiron'ny mpampiasa.
Lalao, fampidinana ary sehatra
Raha manana famandrihana amin'ny Apple Arcade ianao dia azo atao ny mahita ny katalaogin'ny lalao amin'ny fotoana rehetra sy tonga dia misintona izay lalao izay mahaliana. Tsy toy ny lalao mahazatra, ireo lohateny ireo dia manana mari-pankasitrahana manamarina ny sonia ho fampiharana, izay ahafahantsika mihazakazaka mandra-pahatongan'ny daty ialan'izy ireo ny lampihazo na hanafoanana ny famandrihana anay amin'ity serivisy ity. Iangaviana noho izany ny fahazoana miditra amin'ny Internet isaky ny 24 na 48 ora hanamarinana izany.
Ireo lalao amin'ny ankapobeny dia hanome ny mpampiasa fahafaha-mitahiry lalao amin'ny rahona. Ho voatahiry ao amin'ny iCloud amin'ny fotoana rehetra izy ireo, miditra amin'ny Apple ID. Ankoatr'izay, ny lalao rehetra amin'ny sehatra sehatra fanampiana hilalao tsy misy fifandraisana Internet, izay tsy isalasalana fa lafiny iray manan-danja lehibe amin'ny mpampiasa. Ao anatin'ireo lalao dia tsy misy doka, tsy misy fividianana rindrambaiko ao anaty fampiharana, ary tsy misy afaka mampiditra fitaovana fanarahan-dia.
Apple Arcade dia mifanaraka amin'ny fitaovana Apple rehetraafa-tsy ny fiambenan'izy ireo. Hanana izany ny fidirana amin'ny iOS 13, tvOS 13, iPadOS 13 na macOS Catalina amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny tranga rehetra dia tsy maintsy miditra amin'ny App Store isika, izay misy takelaka manokana ho an'ity serivisy ity. Ny orinasa dia nieritreritra momba izany mba hahafahantsika milalao ireo lalao rehetra ireo na inona na inona sehatra.
Araka ny efa nolazainay, dia misy katalaogy miandry antsika voalohany dia hihoatra ny anaram-boninahitra 100 ao amin'ny Apple Arcade. Rehefa mandeha ny fotoana dia hitatra amin'ny lalao vaovao izany, raha ny lalao taloha kosa hivoaka (farafaharatsiny amin'ny tranga sasany). Hotazonina hatrany izy io ary hohavaozina amin'ny fotoana rehetra.
Ny fisafidianana ny lalao eo amin'ny lampihazo dia mifototra amin'ny andiam-pitsipika mazava. Mikatsaka ny hanana lalao izany raha tsy izany dia tsy ho azo atao ny manana ao amin'ny App Store. Amin'ny ankapobeny, mifantoka amin'ny fialamboly izy ireo, manana sary tsara, ankoatry ny filalaovana tsara amin'ny fotoana rehetra. Ka mitady hanolotra traikefa vaovao amin'ny sehatra Apple izy, miaraka amin'ireo lalao izay tsy azontsika sintonina matetika.
Apple dia niara-niasa tamin'ny studio maro tamin'ity sehatra ity. Konami, SEGA, Disney Studios, LEGO, Cartoon Network, Devolver Digital, Gallium, Sumo Digital, Klei Studios (Aza mosarena, tsy misy oksizena), Finji (Night in the Woods), Annapurna Interactive, Bossa Studios, Giant Squid, Konami, Mistwalker Corporation, Snowman dia anarana izay hanana fanatrehana eo amin'ny sehatry ny orinasa.
Ny 19 septambra ho avy izao ny fandefasana Apple Arcade amin'ny fomba ofisialy, toy ny efa voamarina tamin'ity keynote ity avy amin'ny orinasa amerikana. Ny fandefasana azy dia mifanindry amin'ny fandefasana manerantany ny iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13, ary macOS Catalina. Ka amin'ity daty ity dia efa azon'ny mpampiasa alalana ny sehatry ny filalaovan'ity orinasa ity, tafiditra ao amin'ny App Store mihitsy. Ho mora amin'izany ny fidirana amin'io lafiny io.
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe ho an'ny maro dia ny vidin'ity serivisy ity. Araka ny nambaran'ny orinasa, ny vidin'ny fisoratana anarana Apple Arcade dia 4,99 euro isam-bolana. Manana andrana 30 andro izahay, hahafahana mitsapa sy manandrana raha toa ka mahaliana ity filan'ny orinasa ity. Mahagaga ny vidiny, izay hitan'ny maro ho mora vidy tokoa. Na dia zavatra izay tsy isalasalana aza fa hampirisika ny maro hanana famandrihana amin'ity sehatra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Apple » Apple Arcade dia efa manana daty fanombohana sy vidiny any Espana